Konke malunga nezikhetho zokunakekelwa komzimba ezikhethiweyo
Njengoko isiFrentshi sithetha, umfazi uyaba nethemba ngakumbi ngenxa yengubo enhle egqoke kuyo, kodwa yintoni ephantsi kwayo. Ngaba wayesazi ukuba ukubeka ingqwalasela ngakumbi kwisitayela sakho seenwele, isitala seengubo, ebusweni, siyalibala ngokupheleleyo ngesikhumba somzimba wethu. Emva koko, nawuphi na umfazi uziva enesiqiniseko kwaye angenakunyaniseka xa ulusu lomzimba wakhe luphephile kwaye lungenanto. Ukuba nomzimba omninzi owenziwe ngumzimba, sinokuziva ukhululekile kakhulu. Kule nto, kufuneka sizinike ixesha elininzi ngangokunokwenzeka ukuze sikhathalele. Siza kukuxelela yonke into malunga nezononophelo zomzimba ezikhethiweyo.
Wena, kunjalo, uya kuba nombuzo, zeziphi iziqholo zokunakekelwa komzimba ukuba zikhethele isikhumba sakho? Kule mihla inani elikhulu lemveliso yokonkcenkceshela ekunakekelweni komzimba liye labonakala kwaye kwaba nzima kakhulu ukukhetha okulungileyo kakhulu kuthi. Musa ukuxhomekeka kwiingcebiso zamantombazana akho, ngenxa yokuba basebenzisa lo mzobo kwaye bathi kulungile. Kukulungele ukufuna uncedo kwi-cosmetologist yezobugcisa onokuyithatha iimveliso zokuzongamela ofuna ukunyamekela umzimba wakho.
Ingcali kuphela enokuchonga ngokuchanekileyo uhlobo lesikhumba sakho, ukuchonga iingxaki zayo kwaye uphakamise ukuba yintoni unyango oluyimfuneko. Emva kokuba uthintane ne-cosmetologist, unokuthatha kalula imigca yokuzilungisa efanelekileyo emzimbeni wakho. Ukukhetha ubunzima bokunakekelwa komzimba wakho, kufuneka uqaphele ukuba izicumbiso kufuneka ziphuculise, zondle isikhumba sakho kwaye zijongane neengxaki ezifana ne-cellulite, i-varicose veins, amanqaku okulula kunye nokunye.
Kukulungele ukusebenzisa izimonyo ezikhethekileyo zokunyamekela umzimba. Ngelo lwakhiwo luya kuba nako ukufikelela kwimpembelelo eninzi, kwaye iya kusebenza ngeendlela eziliqela ngexesha elilodwa.
1. Inkathalo enzima yesikhumba yomzimba iquka ukukhuselwa kwayo, ukunyanzeleka nokutya, kunye nokukhusela ukuguga kwayo.
2. Ukubunjwa kwezo zimonyo kubandakanya iifom zokwelapha, i-enzyme zendalo, kunye namavithamini, kubonga kubo, zichaphazela zonke iiseli zelusu.
Iimpawu zonyango kuphela eziza kuzalisa ulusu ngobumnandi obufunekayo, amandla, luyakwazi ukuluhlambulula, ulunxwebe luwenze lube luncinci kwaye lukhangeleke. Iimpawu zonyango ziza kugqitywa ngokuqinisekileyo, ngelixa ziqinisekisa ukuveliseka kwemveliso. Ayinayo nayiphi na imilondolozo.
Izimonyo eziphezulu kakhulu ziyi-VICHI nkampani. Benza izimonyo zezokwelapha ezilwa nokuguga kwesikhumba kunye nokunyanzelisa amanzi. Iziqholo ezinjalo azikwazi ukuphilisa kuphela iingxaki zesikhumba, kodwa zonyango. Ukubunjwa kwezi zimonyo kubandakanya amanzi ashushu kunye neempawu zonyango. Siyabulela kwiitrakethi zolu hlobo, ulusu lwethu luhlala luqina, luya kubonakala lukhulu.
Iimpawu zonyango zinobugcisa obuphezulu. Ingaba yindoda kunye nowesifazana. Ungathengisa izimonyo ezinjalo kwi-SPA-salons nakwiivenkile zezonyango zobugcisa. Iquka izixhobo zamachiza kunye nezongezo. Ukuthenga izimonyo zanamhlanje kunokwenzeka kuyo yonke indawo, kodwa into ephambili yokuthabatha izilwanyana zonyango ezichanekileyo zendalo.
Kwakhona ungasebenzisa iivenkile ezithengela i-intanethi zithengisa izimonyo zobugcisa Kwivenkile ye-intanethi, unokuthenga izinto zemvelo, kwaye ngokubaluleke kakhulu, izimonyo zokwelapha, zombini kwesikhumba somntu kunye nomzimba, ngelixa ungahlawulisi imali engaphezulu. Awudingi ukujonga i-gel okanye i-cream ehlukeneyo, ngenxa yokuthenga kwi-intanethi, ungathenga ngokupheleleyo ukuxhalabisa umzimba wakho.
Oomama abathandekayo, kufuneka uzikhumbule ngokwakho, ukuba ufuna ukuba isikhumba sakho somzimba sihlale sibonakala singenasiphako, kufuneka usebenzise rhoqo ukulungiswa okulungileyo. Sithemba ukuba ngoncedo lweengcebiso zethu, uya kuba nako ukukhetha izimonyo ezifanelekileyo zokunakekelwa komzimba.
I-anti-cellulite creams kunye nezihlunu: oko kufuneka ukwazi
Iphunga elimnandi lentombazana
Ubuncwane beMatter for Skin Oily
Ukukhangela kwePrayfect Perfume: Isikhokelo esiSebenzayo sokukhetha iMimoya yabasetyhini
Ukulungiswa kweCream ekhaya
I-Cosmetics yezobuhle zononophelo
I-pie yommbila kunye ne-rosemary
Izifo zesifo somfazi, isichazi-magama
Ngokumalunga ne "fashion faster" kunye nemiphumo emibi yaxelelwa kwifilimu entsha kwi-Cannes Film Festival
Ama-eggplants egxinwe kunye nomzala
Amacandelo amayeza e-vasoconstriction
Ukukhulisa unyana ngomoya onjengeemfazwe
UAnastasia Volochkova uziqhayisa ngeeGucci fakes, umfanekiso
UMikhail Muromov - "okhupha ukhozi"
Ukunyamekelwa kwabantwana kunye nokukhwela kokuqala
Zithini izicathulo zakho ezizithandayo ngawe?
Iingcamango ezinxulumene nobuthathaka besifazane
Ukukhulelwa iiveki ezili-17
I-spaghetti ene-tomato sauce